Kheyraadka Logo ee ugu Fiican Internetka
Waa maxay qiimaha astaanta? Weydii shirkad sida Nike oo kale waxaad dhihi kartaa malaayiin doolar - laakiin runtu waxay tahay, 1971, Nike waxay bixisay $ 35 astaanteeda. Maalmahan, heerka socda ee naqshadeynta astaanta xirfadeed wuxuu noqon karaa meel u dhexeysa $ 150 iyo $ 50,000. Waxaan dhawaan la shaqeynay macmiil ku qarash gareeyay $ 16,000 naqshadeynta astaanta kaliya si aan u helno markii ay sameeyeen Raadinta Sawirka Google ee warshadooda… waxay ka takhaluseen shirkadda waxayna sameeyeen tartan naqshadeynta khadka tooska ah halkii $ 250 waxayna heleen asal, mid gaar ah, iyo astaan ​​si fiican loo qaabeeyey oo ku habboon sumaddooda guud.
Waxaan gabi ahaanba ku aragnaa qiimaha astaan ​​guud, hage tilmaame, iyo astaan ​​la socota. Taasi waxay noqon kartaa maalgashi muhiim ah, laakiin shirkadaha maalgashiga sameeyay ayaa gabi ahaanba arkay natiijooyinka. Mararka qaar si fudud uma awoodi kartid taas, in kastoo, waanan fahmaynaa! Hadaad kaliya ubaahantahay astaan, si daacadnimo ah waxaa jira xoogaa ilo waali ah oo meesha yaala.
Halkan waxaa ku yaal in ka badan ilaha naqshadeynta astaanta 50 ee aan ka helay khadka tooska ah, laga bilaabo dhiirrigelinta illaa abaalmarinnada, tartamada iyo isku-soo-uruurinta, bogagga iyo bogagga taariikhda. Ku raaxayso!
Jeclow fiidiyowgan naqshadeeye runti oo abuuraya astaan ​​ku jirta Adobe Illustrator.
Sida Loo Sameeyo Logo Wanaagsan
Soo ogow waxa ay u baahan tahay si aad u abuurto astaan ​​dhammaystiran oo leh 10-ka tilmaam ee qaabeynta astaamaha lagama maarmaanka ah Just Creative, oo lagu daray naqshadeynta naqshadeynta astaanta! Ku raaxayso.
Astaanta waa inay ahaato fudud.
Astaanta waa inay ahaato waqti la’aan.
Astaanta waa inay ahaato hal abuur leh.
Astaanta waa inay ahaato la aqrin karo.
Astaanta waa inay ahaato la qabsasho.
Astaanta waa inay ahaato jawaab.
Astaanta waa inay ahaato gaar ah.
Astaanta waa inay ahaato la xiriira.
Astaanta waa inay ahaato xariif ah.
Astaanta waa inay ahaato xirfadeed.
Mararka qaar waad ogtahay waxaad rabto, laakiin si fudud uma lihid kartida aad ugu qaadan karto sawirkaaga gogosha ah astaan ​​xirfadeed.
Naqshadeeyayaal - Soo rar sawir (sawir taleefankaaga ku jira, faylka PowerPoint, ama sawir Rinjiga ah) waxaanan u beddelaynaa astaan ​​weyn saacado gudahood.
Naqshadeynta Logo Gaar ah
DesignEvo waa sameyste astaan ​​internet ah oo kaa caawinaya inaad abuurto astaamo u gaar ah oo xirfadla'aan ah bilaash. Waxay bixiyaan in kabadan hal milyan oo icons ah oo la heli karo oo laga raadin karo, boqolaal qoraallo qoraallo iyo qaabab ah oo laga kala xusho iyo aalad tafatir oo awood badan leh si loo asteeyo astaantaada.
Bilow Dhisida Astaantaada
Kheyraadka Dadweynaha ee Logo Design:
Goobaha dadku ku badan yihiin waxay leeyihiin shabakado qaybinta ee naqshadeeyayaasha garaafyada oo soo gudbin kara astaamo. Qofka guuleysta ayaa la siiyaa lacagta. (Adiga ayey kuu fiican tahay… had iyo jeer uma fiicna naqshadeeyayaasha!)
Guul-darrooyinka - laga soo raray $ 200.
NaqshadayntaContest - ka bilow tartan kuu gaar ah $ 100.
DesignCrowd - Ma u baahan tahay Naqshad Logo? Crowdsource Naqshadeyntaada Khadka tooska ah Hada!
Barta dhijitaalka ah - ku dheji qiimahaaga iyo shuruudahaaga mawduucyadan.
eYeka - tartamada la isweydaarsaday halkaas oo aad ku magacawdo qiimahaaga (qiimeyn sare iyo abaalmarino).
48hoursLogo - Naqshadeynta dad badan laga keenay $ 89
Tartamada Sawirka - tartanka laga bilaabo $ 1,000
GraphicRiver - naqshadaha iyo astaamaha astaanta
Hatchwise - tartamada laga bilaabo $ 100
LogoMyWay - tartamada laga bilaabo $ 200.
LogoTournament - Soo qaado astaanta aad runtii rabto adiga oo ka dooranaya 50-200 + naqshadaha gaarka ah $ 275.
99designs - Naqshadeynta dad badan laga keenay $ 211
MycroBurst - laga soo raray $ 149
XULASHO - Marti geli tartankaaga qaabeynta
ZenLayout - tartamada ka bilaabmaya $ 250
Shirkadaha Astaanta Xirfadlaha:
Wakaaladaha bixiya adeegyada astaanta guud ahaan waxay dammaanad ka qaadaan in shaqadoodu ay tahay mid gaar ah oo ay ka shaqeeyaan sidii ay ula mid noqon lahaayeen astaantaada astaantaada guud.
Naqshad Logo La Awoodi Karo - baakadaha laga bilaabo $ 45
BusinessLogo.net - baakadaha laga bilaabo $ 99
BXC - shirkadda calaamadeynta, codso qiimeyn.
Shirkadaha Shirkadda - la-talin bilaash ah, adeegga naqshadeynta oo ka bilaabmaya $ 75 saacaddii
Naqshadaynta Astaanta Infinity - naqshadeynta laga bilaabo $ 89
Khadka - xirmooyinka naqshadeynta xirfadeed laga bilaabo $ 99
LogoBee - naqshadeynta laga bilaabo $ 199
Warshad Logo - Naqshadeynta astaanta laga bilaabo $ 395
Kooxda Naqshadeynta Calaamadaha - baakadaha laga bilaabo $ 149
Logo Hay'adda Naqshadeynta Caalamiga ah - kala xiriir xigashooyinka
Logo Loft - baakadaha laga bilaabo $ 99
LogoMagic.com - baakadaha ka bilaabmaya $ 269.
LogoNerds.com - baakadaha ka bilaabmaya $ 27.
Gorgortanka - baakadaha ka bilaabmaya $ 250.
Xulka wararka oo dhan - laga bilaabo HP, naqshadaha laga bilaabo $ 299.
NetMen-ka - Naqshadeynta laga bilaabo $ 149.
Vistaprint - Astaamo horay loo sameeyay oo si otomaatig ah loo bilaabay bilaash adeegsiga adeegyadooda.
Goobaha Waxyiga Astaamaha:
Waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd inaad isku daydo inaad sameysato astaan ​​kuu gaar ah ama aad ka hesho kuwo dhiirrigelin ah oo tixraac ah! Waa kuwan qaar ka mid ah boggaga khayraadka waaweyn ee astaamaha.
Blog-omotives - laga bilaabo la taliyaha calaamadeynta Jeff Fisher
Hal abuur - goob laga helo Envato
Astaamo caan ah - degel u heellan inuu kuu keeno qaar ka mid ah wararka ugu fiican, dib u eegista, iyo macluumaadka la xiriira warshadaha naqshadeynta astaanta.
Logobird - Logobird waa degel naqshadeysan oo London ka dhisan & istudiya.
Shirkadda Logo - Naqshadeynta Calaamadaha Khaaska ah… qaadashada naqshadaha meel sare.
Astaanta Calanka - dhiirrigelinta naqshadeynta astaanta iyo goobta bogga.
LogoPond - Logopond wuxuu ku soo bandhigayaa shaqada ugu fiican shaqooyinka aqoonsiga shabakadda oo dhan. Farshaxan Logo oo ka socda dhammaan heerarka horumarka iyo meelaha adduunka ayaa ku soo noqnoqda degelkan.
Blog Logo - Logo Blog wuxuu u heellan yahay inuu noqdo ilaha ugu horreeya ee websaydhka qaabaynta astaanta.
Blog Logo Design - Logo Designer Blog waa baloog si gaar ah diirada loogu saaray sumadeynta, astaanta & naqshada aqoonsiga.
Astaanta Abaalmarinta Riyada - baloog la soo gudbiyo bille iyo bille guuleyste.
Logolog - Logolog waa baloog ku saabsan qaabeynta astaanta.
Logolounge - wararka iyo isbeddellada ku saabsan astaamaha.
Warbaahinta Bistro - goobta abaalmarinta astaanta sanadlaha ah.
Summaddayda loogu talagalay DK New Media
Sanado ka hor, naqshadeeyeheygu wuxuu arkay astaanteyda wuuna sii waday inuu i weydiiyo haddii aan jeclaan lahaa in la cusbooneysiiyo. Waxaan ku dhahay maya ka dibna runtii wuxuu i siiyay qaabkiisa…
Waa tusaale fantastik ah oo ah wax u gaar ah oo la xasuusto labadaba (sidaan qabo). Farshaxanku wuxuu sameeyay dhowr waxyaalood:
Wuxuu isku daray d iyo k labadaba (nooc)
Wuxuu adeegsaday fallaadh kor u matalaysa awooddayda ah inaan ka caawiyo macaamiisha inay koraan.
Wuxuu adeegsaday xaglo aan caadi ahayn dhinac kasta oo astaanta ka mid ah si uu u matalo inaanan sida caadiga ah wax u qaban.
In kasta oo aanan waligey ka codsan dib-u-qaabeynta, isla markiiba waxaan ku jeclaaday sida ay u meteleyso astaanteyda shaqsiyeed. Waxaan dib u naqshadaynayay kaararka, calaamadaha, iyo boggeyga maalinta xigta!
Soo iibso feylasha Logo Vector si aad u naqshadeeysid taada
Waxaan jecel nahay kafaala qaadayaasheena Depositphotos oo waxay leeyihiin tan oo logos ah oo aad ku iibsan karto feylasha vektorka. Arag wax kuu dhow waxaad u baahan tahay? Iibso, soo dejiso oo u habee si aad adigu uga dhigto!
U dukaamee Vectors Hadda!
Shaacinta: Waxaan adeegsaneynaa xiriiriyeyaal xiriir la leh boostadan oo dhan.
Maqaallo Dheeraad ah iyo Macluumaad
Sida loo qaabeeyo astaan ​​u gaar ah oo lama iloobaan ah
Tags: naqshadaha logo cabsi badanshirkadda ugu fiican ee naqshadeynta astaantanaqshadeynta astaanta ugu fiicanadeegga naqshadeynta astaanta ugu fiicansoo iibso astaaniibso astaanNaqshadeynta astaanta jaban ee khadka tooska ahlogos raqiis ah khadka tooska ahNaqshadaynta ilaha ilahadad badanNaqshadeynta astaantaastaan ​​badanNaqshadaynta astaantaNaqshadaynta astaantalogos dad badansawironaqshadee astaanastaanta naqshadatartanka tartankadesignevonaqshadeynta astaanta internetkakaliya hal abuur lehliiska goobaha astaantalogoastaanta farxaddalogo logodib u eegista shirkadda naqshadeynta astaantatartamada naqshadeynta astaantaastaanta astaantadhiirrigelinta astaantagoobaha astaantasahaminta astaantacalaamadaha vectorslogoloungebalooggacalaamadahasuuq geynta fikradaha sumaddabistro warbaahinhalka laga gato astaan
Douglas - Waad ku mahadsantahay inaad nagu soo darto liiskaaga.
FYI waxaan hada bilownay qaab cusub oo cadaalad ah oo ah 'isku soo uruurinta isku dhafan' halkaasoo macaamiisha ay ku casuumi karaan oo ay ku siin karaan nashqadeeyayaal qaas ah si ay ugu soo gudbiyaan tartamada naqshadeynta - eeg war-saxaafadeedkeena maanta: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Qodobka ugu muhiimsan waa tan macnaheedu waa naqshadeeyayaashu waxay helayaan lacag bixin dammaanad ah iyadoon loo eegin haddii nashqaddooda la doorto. Isku soo wada duuboo dadku uma baahna inay noqdaan guuleyste waxay qaadaneysaa oo dhan ama, sidaad hadalka u dhigtay, “uma fiicna naqshadayaasha”! Haddii aad xiiseyneyso inaad wareysi la yeelato naftayda ama aad ku wado mashruuc daraasad kiis iyada oo loo marayo DesignCrowd fadlan nala soo xiriir http://twitter.com/designcrowd ????
Sidoo kale, waa kuwan dhowr ilaha naqshadeynta astaanta boggeena.
Jun 7, 2010 saacadu markay ahayd 9:28 AM
In kasta oo aan ku ammaanayo awoodda aad u leedahay "naqshadeynta astaanta" Google, haddana waxaan aad iyo aad uga xumahay kororka iyo dabaaldegga naqshadeynta astaanta raqiiska ah. Bogagga aad bixisay waxay si fudud u bixiyaan astaamo muuqaal dhalaalaya (oo la mid ah "magacaaga halkan"), oo aan lahayn feker istiraatiijiyadeed haba yaraatee.
Ku riixida goobaha calaamadeynta dadka badan - adoo ku dhejinaya talooyin ku saabsan hubinta inaad hesho astaan ​​"asal ah" - waa lagu qosli karaa haddii aan si yar loo dayacin.
Waxaad ku saxantahay hal qodob: waxaad helaysaa waxaad ku bixisay. Si kastaba ha noqotee, rajada aan u qabo akhristayaashaada waxay noqon laheyd inay sameeyaan waxoogaa dadaal dheeri ah kahor intaan lasiinin astaanta ay kujiraan tartanka naqshadeynta.
Maamule, agaasime hal abuur leh
Jun 7, 2010 saacadu markay ahayd 11:07 AM
Qaddariyo jawaab celinta (runtiina samee) waxaanan fahamsanahay in hay'adaha calaamadeynta booska waxyeelleeyay ay hoos yimaadaan si ay u caddeeyaan qiimahooda. Shaki igagama jiro qiimahaaga - Waxaan arkay shirkado sida Kristian Andersen oo kale shirkadaha ka qaada wax aan waxba ahayn boqollaal milyan oo doollar - qaarkoodna waxay ku leeyihiin aqoonsi ay u leeyihiin.
Naqshadaynta astaanta ayaa lagu socdaa - kama duwana shirkadaha kale ee websaydhku xilligan oo kale. Waxaan haynaa dad sida Chris Anderson oo kale "Bilaash!" Bogagga martigelinta fiidiyowgu lama tartami karaan YouTube, shirkadaha Analytics waxay la halgameen Google, iyo nidaamyada CMS sida Squarespace oo la tartamaya WordPress.
Waan istaagi kari lahaa oo waxaan ku doodi lahaa “Spec No”, laakiin shaqsiyan waan isticmaalay qaar ka mid ah adeegyadan waxaanan ku helay natiijooyin aad u wanaagsan. Ma jiro wax qarsoon oo xaqiiqda ah in inta aadan jeclayn iyaga, ay ku sii kordhayaan caan. Iyo shirkad lacag la'aantu hayso oo aan awoodin inay soo iibsato sumcad xirfadeed, maxaa diidaya inaad raadsato astaan ​​jaban oo jilicsan? Waxay samayn lahaayeen iyadoon wax kale jirin.
Waxaan jeclaan lahaa inaad sameyso qoraal ku saabsan sababta aad uga fogaan laheyd qaar / qaar badan oo ka mid ah adeegyadan!
GeniusRocket (www.geniusrocket.com), oo uu madax u yahay Ex AOL ful Mark Walsh oo uu maamulo Peter LaMotte, wuxuu leeyahay awood caalami ah oo isugu soo aruurinta astaamaha iyo baahiyaha kale ee hal abuurka leh.
Nov 2, 2010 at 4: 25 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida liiska!
Waxaan hadda bilownay goob cusub oo loogu talagalay naqshadeynta astaanta: http://www.logoarena.com
Oktoobar 10, 2011 at 6:10 AM
Fadlan ka saar marvellogodesign liiskaaga maxaa yeelay waa KHIYAANO. Fiiri http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 andhttp: //www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Oktoobar 10, 2011 at 8:16 AM
Mahadsanid, Michaël! Waan ka saaray liiska oo waxaan ku daray Creattica.
Nov 30, 2011 saacadu markay tahay 3:43 PM
Ka taxaddar Naqshadeynta Calaamadaha Cajiibka ah. Ka fogow ma waxay ku qaataan da 'inay ku jawaabaan. Aan xirfad sare lahayn.
Jul 3, 2012 markay ahayd 11:54 AM
Waxaan dhawaan sameeyay astaan ​​leh http://www.logotypers.com Waxay qaateen sawir gacmeedkeyga waxayna u rogeen astaan ​​xirfadeed kaliya $ 10 (laakiin waa inaad soo gelisaa sawir, ama ppt ama wax aad ku hagto)
Waa maxay fikrad cajiib ah! Waxaan kudarsaday 'Logotypers' qaybteeda. Mahadsanid!
Dhammaan ilaha kheyraadka wadaagga qaabeynta astaanta ayaa ah mid waxtar leh, naqshad qurux badan oo leh soo bandhigid hal abuur leh. Alaab aad u wanaagsan oo aad wadaagtay taada. Inbadan ayaa lagu qancay oo aan dareemayaa mahadnaqa wadaagista la jecelyahay.
Waan jeclahay liiskan. Xaqiiqda waxaad siineysaa fursado kala duwan oo loogu talagalay dadka iyo xiriiriyeyaasha, si wanaagsan ayaa loo qabtay… kani waa ilaaliye!
Aad baad u mahadsantahay Gabriella!
Oktoobar 17, 2015 at 1:34 AM
omg, taasi waa weyn
xiriiriyeyaal waaweyn, tnx
Jun 28, 2016 saacadu markay ahayd 9:25 AM
Astaantu waa muraayada sawirkaaga. Cuntadaada aad ku abuureyso astaan ​​waa wax soo jiidasho leh.
Haa, sumadda Nike waxay ku kacday $ 35 bilowgii laakiin hadda qiimaheeda wuxuu ka badan yahay $ 600,000. Keliya sameynta astaan ​​wanaagsan waligeed kaa caawin meyso kobcinta ganacsigaaga. Adeegyadaada iyo alaabadaadu waa inay sidoo kale muujiyaan xoogga astaantaada.
Oktoobar 4, 2017 at 6:02 AM
Waxaan raadinayay fikradaha Logo Design si aan u sameeyo astaan ​​u gaar ah oo aan ku helay boostadaada. Waad ku mahadsan tahay qoraalkan. Waxay haysaa fikrado wanaagsan oo lagu dabakho mashruucayga cusub.
Waad ku mahadsantahay talooyinkaaga qiimaha badan
20, 2019 at 9: 16 AM
Qoraal cajiib ah oo ku saabsan qaabeynta astaanta. Xaqiiqdii waxaan helay dhiirigelin badan oo ku saabsan qoraal cusub. Waad ku mahadsan tahay tan tan Doug, xmas xariir!
Jan 7, 2020 saacadu markay ahayd 4:08 PM
Aad baad ugu mahadsantahay faallada fiican ee Sally! Waxaan rajeynayaa inaad heshay fasax aan caadi aheyn.
Jun 29, 2021 saacadu markay ahayd 9:49 AM
Qaar ka mid ah Kheyraadka Naqshadeynta Calaamadaha ee Dammaanad Qaadka ah